होटल म्यानेज्मेन्टको पढाइ, रोजगारी पनि आम्दानी पनि !
३६७७ पटक पढिएको
इटहरी । सुनिल भुषाल काठमाण्डौमा बसेर होटल म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा काम गरिरहेका थिए । होटल म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा शिक्षा र व्यवसाय गरिरहदा भुषालले देखे पुर्वबाट ठूलो संख्यमा यो बिषयको अध्ययन गर्न बिद्यार्थी काठमाण्डौ आइरहेका छन् । होटल व्यवसाय क्षेत्रमा नाम र दाम देखेर काठमाण्डौ पुगेका बिद्यार्थीको समय र पैसा काठमाण्डौले खाइरहेको छ । त्यसपछि उनले सोचे होटल म्यानेजमेन्टको शिक्षा इटहरीमै शुरु गर्यो भने त सेवा पनि हुन्छ व्यवसाय पनि । यही सोच मनमा अएपछि भुषाल काठमाण्डौ छाडेर ३ बर्ष अघि इटहरी आए र शुरु गरे प्रिमियर होटल स्कुल । अहिले त्यही स्कुल प्रदेश नम्वर एकमा होटल म्यानेजमेन्ट पढाइको क्षेत्रमा अग्रणी मात्रै भएको छैन स्कुलबाट उत्पादन भएका बिद्यार्थी बिश्वका टप होटलमा रोगजारी गर्न समेत सफल भएका छन् । होटलको काम पनि काम हो ? ह्या्.. होटलमा पनि काम गर्ने ? भन्ने धारणा चेन्ज भइनसकेको अवस्थामा सञ्चारपाटीले प्रिमियर होटल स्कुलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुषाललाई होटल म्यानेजमेन्ट पढाइको स्कोप र सम्भावना के छ भनेर सोधेको छ : लोकल लेभलमा कुरा गर्दा मात्रै होटलको काम पनि काम हो भनेर भनिएको हो । तर अन्तराष्ट्रिय बजारमा होटलको सेवा अन्यन्तै स्तरीय छन् । होटलमा काम गर्नु ग्लयामरर्स पनि हो । अन्तराष्ट्रिय बजारमा होटलमा बिभिन्न डिर्पाटमेन्ट र बिशिष्ट सेवा छन् । जस्तो कुकु । कुकका पनि धेरै खाले बिधा छन् । कुन देशको कुन डिक्समा ‘स्पेसलाइस्ट’ गर्ने भन्ने करा महत्वपूर्ण हो । अर्को सर्भिसको कुरा हुन्छ । कफि सप, बार, अल्टिडाइनिंगको क्षेत्रमा पनि सम्भावना छ । त्यो बाहेक कोठा सफाई, फ्रन्ट अफिसको कुरा हुन्छ भने होटलको सेल्स एण्ड मार्केटिंगको क्षेत्रमा पनि ठूलो मात्रामा जनशक्तिको माग छ । व्याङ्केटिंग, रिर्जभेसन गर्ने, एकाउन्टिंग,फाइनन्स,स्टाफहरु हेर्ने नर्सिङ डिपार्टमेन्टका क्षेत्रमा समेत होटलमा माग र सम्भावना छ । अहिले त होटलमा इन्जिनियरको समेत माग छ । तपाईलाई भनौ होटलमा ७० भन्दा बढि डिर्पाटमेन्ट छन् । ती सवै डिर्पाटमा जनशक्तिको आवश्यकता र खाँचो छ ।
तर अहिले पनि धेरै अभिभावकको चाहाना होटल क्षेत्रमा छोरा छोरी होटल लाइनमा नजाउन् भन्ने नै छ । डाक्टर, इन्जिनियर र त्यसपछि सरकारी जागिर रोजाइमा भइरहदा के कारणले होटल क्षेत्रको पढाइ पनि राम्रौ हो त ? हामीले जिज्ञासा राख्यौ
हो कुरा यही नेर छ । सवै डाक्टर इन्जिनियर बन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बिद्यार्थीको क्षमता र पारिवारको लगानी गर्ने अवस्था पनि जोडिन्छ यी पढाइमा । तर होटलको शिक्षा सवैको पहुँचमा छ । सामान्य बिद्यार्थीले पनि यस्ता सिप मुलक तालिम पुरा गर्न सक्छन् । खर्चको हिसाबले पनि यो सस्तो छ । थोरै पैसा लगानी गरेर पनि धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ यस क्षेत्रमा । होटल म्यानेजमेन्टको पढाई सैद्यान्तिक भन्दा व्यवहारिक बढि हुन्छ । त्यसैले सवै बिद्यार्थीले होटल म्यानेजमेन्टको कोर्स पुरा गर्न सक्छन् । त्यसैले अहिले अबिभावकको रोजाइ पनि परिवर्तन हुँदैछ । डक्टर इन्जिनियर नबने नि होटलको पढाइ भयो भने राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । बिदेसमा पनि अवसर छ भनेर बुभ्mन थाल्नु भएको छ । लगानीको कुरा गर्ने हो भने डाक्टर, इन्जिनियरको पढाइमा धेरै खर्च लाग्छ । तर होटलका कोर्सहरु एक लाख २० हजार देखि एक लाख ६० हजार लगानीमा सकिन्छ । हाम्रै स्कुलमा पनि यति पैसा तिरेर उत्कृष्ठ सिप हासिल गर्न सकिन्छ । अहिले नेपाली मार्केटमै पनि यी कोर्स पढेकाहरुले राम्रो आम्दानी गरिरकेका छन् भने सामान्य बिद्यार्थीले यी कोर्स गरेर बिदेस जाने हो भने पनि एक डेढ लाख रुपैयाँ मासिक कमाउन सक्छन् । नेपालमै पनि ६ महिनाको भोकसनल पढाइ गरेका बिद्यार्थीले पनि ४० देखि ५० हजार रुपैयाँ कमाउन सक्छन् भने दुवै कतार जस्ता मध्य पूर्वका देशमा डेढ लाख रुपैयाँ सम्म मज्जाले कमाइरहेका छ् । युरोप अमेरीकका तर्फ जाने हो भने त यस क्षेत्रको आम्दानी निक्कै ठूलो छ । त्यसैले कुरा कहाँ नेर हो भने छोरा छोरीलाई मास्टर गराएर काम नपाउने अवस्थामा राख्ने की पढाइ सक्ने बित्तिकै रोजगारी दिने ? यो बिषय प्रधान छ ।
नेपालका होटल म्यानेजमेन्ट स्कुलहरुले १० बर्ष उत्पादन गरेक बिद्यार्थी दुवैइमा एक बर्षका लागि पनि पुग्दैन । नेपालमै पनि ठूला ठूला तारे होटलहरु खुलिरहेका छन् । त्यहाँ पनि दक्ष जनशत्तिको खाँचो छ । बिदेसको कुरा गर्ने हो भने त संसार भर होटलका लागि चाहिने जनशक्तिको खाँचो छ । मध्य पुर्व, युरोप र अमेरिकामा समेत हाइ डिमान्ड छ र उनीहरुका लागि ‘पे’ गर्ने पनि ठूलो मात्रा छ । एउटा समान्य मानिसले ५० हजार रुपैयाँ देखि डेढ लाख रुपैयाँ सम्म कमाइरहेका छन् । युरोप र अमेरिका जान चाहानेहरुका लागि भिषा पनि सजिलै लाग्ने हुनाले यो अपार सम्भावनाको क्षेत्र हो । अन्य बिधामा पढेकाहरुको भिषा लाग्न समस्या छ । तर यो क्षेत्रममा सजिलो छ । यति पैसा कमाउन कित टप डाक्टर हुनु पर्यो कित टप इन्जिनियर यो बाहेको बिषय भनेको यही होटलको पढाई हो । रोजगारी बिदेस र कमाइका हिसाबले ।
एउटै हो पढाई
त्यसपछि हामीले प्रिमियर स्कुल होटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल भुषाललाई अर्को जिज्ञासा राख्यौ । यहाँको पढाइ र बाहिरको होटलको पढाइमा केहि फरक छ की ?
धेरैलाई अहिले पनि लागि रहेको छ की इटहरी जस्तो ठाँउमा खुलेको स्कुलमा पढेका बिद्यार्थीहरुको गुणस्तर र बाहिर पढेका बिद्यार्थीको सिपको गुणस्तर फरक छ भन्ने धारणा छ । कतिले त होटलकै पढाइ गर्नका लागि पनि बिदेस जाने सोच बनाइरहेका छन् । यो मानसिकता मात्रै हो । कति पय सिकाइ विदेसको भन्दा पनि यहाँको राम्रो छ । पढाउने टेक्निक एउटै हो । विदेसको पढाई र प्रिमियर होटल स्कुलको पढाइमा केहि फरक छैन । कोर्सहरु एउटै छन् । हामी पनि त्यही मापदण्डको भौतिक पूर्वाधार बनाएर काम गरिरहेका छौ । सैद्यान्तिक भन्दा व्यवहारीक शिक्षामा जोड दिन्छौ । हुन पनि यो पढाइ व्यहारीक पढाई नै हो । तपाँइलाई हामी तथ्यमा भन्छौ तीन बर्षको अबधिमा हाम्रा एक सय २० भन्दा बढि बिद्यार्थीले अन्तराष्ट्रिय बजारमा रोजगारी पाएका छन् । नेपाली बजारमा समेत प्रिमियर होटल स्कुलका बिद्यार्थीले रोजगारी पाएका छन् । हाम्रो शिक्षाको क्वालिटी राम्रो भएकै कारण त हो बिदेसको बजारमा हाम्रा बिद्यार्थी बिकेका । अहिले संसारका टप होटलहरुमा हाम्रा बिदार्थीले रोजगारी पाएका छन् । उदाहरणका लागि रिचकाल्टुन,फोर्ससिजन,मारियल्ट,फेयरमोन्ट, हायत लगायतका होटललाई लिन सकिन्छ । यी संसारका हाइ र्याङ्किङ्का होटल हुन् । त्यहाँ हाम्रा विद्यार्थीले रोजगारी गरिरहेका छन् । नेपाल बाहिरका अमेरिका, जापान, कोरीया, अस्ट्रेलिया, थाइल्याण्ड,हङकङ,स्विटजरल्याण्ड,लगायतका देशहरुमा नेपाली बिद्यार्थिहरूलाई रोजगारी दिलाउन होटल प्रिमियर सफल भएको हो ।
अष्ट्रेलियाको डिग्री प्रिमियरमा
यसै बर्षदेखि अष्ट्रेलियाको डिग्रि इटहरीबाटै बिद्यार्थीले प्राप्त गर्ने भएका छन् । २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर अष्ट्रेलियमा जुन डिग्रि हासिल हुन्छ अव तीन लाख ७५ हजारमा यहि हुने भएको छ । अष्ट्रेलियन सरकारले स्कुललाई छनौट गरिसकेका छ । सो कोर्स गर्नका लागि बिद्यार्थीले आईएलटियसमा ५दशमलब ५ ल्याउनै पर्छ । भर्नाको प्रकृया अष्ट्रेलियावाटै हुन्छ । जाँच र सर्टिफिकेट पनि अष्ट्रेलियाबाटै हुन्छ । हामीले पढाइ दिने मात्रै हो र त्यो कोर्स गरिसकेका मानिसहरु लेभल ३ सर्टिपिकेट वाला हुन्छन् । अष्ट्रेलियन सरकारले पिआर पनि दिन सक्छ र रोजगारी पनि त्यहाँ सजिलै हुन्छ । त्यो खालको कोर्स लन्ज गर्दैछौ ।